यस्तो छ थाहा पाउनुहोस् च्याउ र मानव स्वास्थ्य वीचको सम्वन्ध
डिसेम्बर 28, 2018 डिसेम्बर 28, 2018 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments च्याउ, डा. राम बहादुर बोहरा, मानव, स्वास्थ्य
जाडोमा मासुको तुलनामा च्याउलाई प्रयोग गर्दा फाइदा बढी हुने हाम्रो मान्यता छ । च्याउमा जनावरको मासुमा पाइने जस्तै राम्रो गुणस्तरको प्रोटिन हुन्छ । यसमा प्रोटिन बाहेक भिटामिन ‘सी’ एवं ‘बी’ कम्प्लेक्स, विशेषत: थाइमिन एवं रिबोफ्लेबिन समेत पाइन्छ ।
कुनै पनि एउटा खानेकुरा त्यसमा स्वास्थ्यका लागि के तत्व पाइन्छ भन्ने कुराले महत्वपूर्ण हुने गर्छ । च्याउ त्यस्तै महत्वपूर्ण खानेकुराभित्र पर्दछ । दैनिक खानामा विभिन्न रङ्गीविरङ्गी फलफूल र तरकारीका साथमा कहिलेकाही रङहीन च्याउलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ ।
तर, सबै च्याउ खानयोग्य भने हुँदैनन् । कतिपय च्याउमा मानव शरीरलाई हानी पुर्‍याउने विषालुतत्व पनि पाइन्छ । विशेषगरी, जंगली च्याउ खाँदा वा टिप्दा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । ‘जंगली च्याउ खाएर मृत्यु’ भन्ने समाचार हामीले सुनिरहेकै हौं । तसर्थ, नचिनेका र जंगली च्याउका साटो खानयोग्य च्याउलाई आफ्नो भोजनमा समावेश गरेर धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिऔं ।
उच्च रक्तचाप एवं हाइपर टेन्सनका रोगीलाई च्याउ खान भनिन्छ । स्वस्थ रहन हामीले हाम्रो स्वास्थ्य लाई ध्यानमा राख्न आवस्यक छ । आज मानिस आय दिन विभिन्न प्रकारका नयाँ नयाँ रोग मानिसलाई लाग्दै छ । रोगी मासुले मानिसको स्वास्थ्यलाई फाइदा होइन बेफाईदा नै बढी हुने हुनाले यसको विकल्पको रूपमा च्याउ खाने परामर्श चिकित्सकको छ ।
← महिलाको अनुहारमा दाह्री जुँगा किन आउदैन ?
महिलाको स्वर सुरिलो हुने कारणहरु →
जुलाई 17, 2019 जुलाई 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
2 thoughts on “च्याउ र मानव स्वास्थ्य”